Habka Boomerang ee Iscasilaadii Wayn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Education » Habka Boomerang ee Iscasilaadii Wayn
Education • Dadka • Wararka Singapore • Daalacanayo Hadda
Written by Avi Liran
Dale Carnegie wuxuu yidhi "Noloshu waa boomerang. Waxa aad siiso, waad helaysaa.” Sidee loo-shaqeeyayaashu u isticmaali karaan aragtidan si ay ugu beddelaan Is-casilaadda Wayn fursad? Nin baa sidaas sameeyay, natiijaduna waxay noqotay mid yaab leh.
In ka badan 19 milyan oo shaqaale Maraykan ah iyo tiro ahaan ayaa ka tagay shaqooyinkoodii sanadkan. Tani waa tiradii ugu badnayd ee uu diiwaan geliyo Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka taariikhda. Sida laga soo xigtay Microsoft, 49% shaqaalaha Singapore waxay qorsheynayaan inay ka tagaan shaqadooda dhamaadka sanadkan.
Dhammaan diidmada ku saabsan Is-casilaadda weyn ee sida qulqulka wararka iyo baraha bulshadu ku xidhiidho miyay naga indho-tireen fursadaha waaweyn ee dhexyaalla? Si aan taas uga jawaabno, waxaan u baahannahay inaan marka hore eegno sababta ay dad badani uga tagayaan shaqadooda.
Inkasta oo ay run tahay in tiro badan oo shaqaaluhu ay shaqada uga tagaan sababo la xidhiidha ilaalin la'aanta shaqaalaha, walbahaarka, ixtiraam la'aanta iyo ku qanacsanaanta dhaqanka ururkooda, waxaa jira sababo qotodheer oo dheeraad ah oo ku saabsan shaqada.
Makiinada 'cunida kariyaha' ee masiibada ah ee qufulka iyo go'doominta shaqada-guriga ayaa u oggolaatay waqti badan inay ka fikiraan oo ay qiimeeyaan doorashadooda shaqo. Ma aha oo kaliya in tani ay dadka ku riixday inay ogaadaan inay u baahan yihiin inay raadiyaan fursado la jaan qaadaya qiyamkooda, laakiin waxay sidoo kale ku dhiirigelisay shakhsiyaadka inay sii wataan xirfadahooda iyo riyooyinkooda.
Dhab ahaantii, Aviva, oo ah bixiyaha caymiska ugu weyn UK, ayaa ogaatay in ku dhawaad ​​60% shaqaalaha UK ay ku talo jiraan beddelka shaqada. Intaa waxa dheer, saamaynta silo ee dhaqanka shirkadaha, oo uu uga sii daray covid, waxay keentay in shaqaale badan ay dareemaan kala go'an, la aqoonsan la'yahay, iyo lama arag. Tani waxay abuurtay rabitaanka dareenka lahaanshaha.
Iyada oo dad badan oo adduunka ah ay dib u qaabaynayaan mudnaantooda, Is-casilaadda Wayn ayaa loo arki karaa inay tahay ku-abuuraha fursadaha. Haddaba, maxaan samayn karnaa, shaqa-bixiye ahaan, marka ay hibadayadu ka baxdo? Sideen uga faa'iidaysan karnaa tan? Muxuu samayn lahaa hogaamiyaha faraxsan?
Habka Hogaamiye ee farxadda leh
Greg Allan, maareeyaha guud ee hore ee Marriott ee Singapore, Madaxweynaha & Kooxda Huteelka COO Aryaduta ee Indonesia, waa hogaamiye soo dhawayn heersare ah oo heer C ah. Waxa uu i baray cashar qiimo leh 2007dii sida hoggaamiyaha farxadda leh uu u wajaho arrinta khusaysa shaqo ka tegista shaqaalaheenna tirada badan.
Sanadkaas dhexdiisa, hudheelo badan oo cusub ayaa shaqaaleysiinayey xirfado cusub, waxaana ka mid ahaa labada goobood ee isku dhafan ee Marina Bay Sands iyo Resort World Sentosa oo u baahnaa in ka badan 15,000 oo qof. Halkee bay ugaarsan lahaayeen maamulayaasha ugu fiican? Marriott waxay ku jirtay liiska ugu sarreeya sababtoo ah waxaa si fiican loo yaqaanaa inay leedahay dhaqan weyn oo si joogto ah u horumariya xubnaha kooxda.
Greg waxa uu ku qasbanaaday in uu sameeyo wax si uu u joojiyo baxsashadii hibada, sidaa awgeed waxa uu bilaabay "Hawlgalka Boomerang": Greg waxa uu sameeyay doorasho. Shaqaale kasta oo is-casilay, waxa uu gelin lahaa wakhti, tamar, naxariis, iyo taageero halkii uu ka sheegi lahaa niyad-jabka dabiiciga ah ee dareemay markii dadka aad maalgeliso oo aad daryeesho fasax. Waxa isaga ku soo noqday yaab.
Waxaa loo yaqaan 'Chief Delighting Officer', qoraa, dhaqaale yahan iyo ku hadla khabiir caalami ah, Avi Liran waxa uu cilmi-baadhis ku samaynayey oo uu hirgeliyey isbeddelka dhaqamada wanaagsan ee kobciya shaqaalaha iyo macaamiisha farxadda leh.
lenny ravich wuxuu leeyahay,
Diisambar 9, 2021 at 06:09
Maqaal hal abuur leh. Fikirka asalka ah. Faa'iido leh
Hagaajinta Nolosha Bukaanka Medicare ee qaba Cudurka Kelyaha Hadda January 20, 2022